Isikole Esidala Sase-Askainen - I-Airbnb
Isikole Esidala Sase-Askainen
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Kaisa
Ku-Archipelago Ring Road, esitezi esiphezulu sesikole esidala, kunendawo yabantu abadala abane nezingane ezimbili. Ngendawo yakho yokungena ungangena ngokuqondile esitezi sesibili, lapho ungathola khona indawo yokudlela endaweni yokwamukela izivakashi. Ukuqoshwa kwakudala kanye ne-
i-gymnasium, kanye negumbi lomtapo wolwazi, isebenza njengamakamelo okulala. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela endlini yokugezela yangasese nendlu yangasese.
Ehlobo lika-2022, indlu ayihambelani nokubukeka kwezithombe zendlu. I-frontade boarding kanye nezitebhisi zangaphandle zidiliziwe. Noma kunjalo, ingaphakathi lisahambisana nezithombe.
Ngasemaphethelweni enkaba yedolobha elikhuphukayo, ikhaya lethu elingenasici liyisikole esidala sabantu esakhiwe ngo-1928. Amakamelo ezivakashi athokomele futhi avulekile esitezi esiphezulu. Ikamelo lokulala elikhulu lihlalisa abantu abadala ababili nezingane ezimbili. Ikamelo elincane linemibhede yabantu abadala ababili nengane encane eyodwa. Indawo yonke yaphansi ingasetshenziswa kuphela yiqembu elilodwa lezivakashi ngesikhathi, ngakho igumbi nendawo yokulala ingakhethwa kuphela lapho kufikwa. Alikho ikhishi, kodwa ungathola isiqandisi, umshini wekhofi, iketela letiye, i-microwave, ne-toaster ephaseji. Indlu iye yalungiswa ngokucabangela eminyakeni embalwa edlule, kancane nje ngesikhathi. Indlu ayisha, futhi ingase ivele futhi ibe nomuzwa - sithi, ngendlela enhle.
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 2 imibhede yosana
Indlu yethu itholakala amakhilomitha angu-3 ukusuka enkabeni yedolobha lase-Askainen, lapho ungathola khona isitolo esincane sedolobhana esinamasevisi ekhofi nezindawo zokudlela. Indawo yokudlela isidlo sasemini se-cafe nayo ixhumene nesigodlo esimangalisayo esiqhingini sase-Louhisa. Kungamakhilomitha angu-6 ukuya ebhishi lomphakathi eliseduze. Ibanga lokuya e-Naantal lingamakhilomitha angu-20, futhi ukuya e-Turku lingamakhilomitha angaba ngu-30.
Hlola ezinye izinketho ezise- Masku namaphethelo